को’रोना संक्र-मित निको हुने दर वृद्धि, संक्र-मित संख्या घट्दै ।
काठमाडौं : नेपालमा को’रोना भाइरस संक्र’मितको नि’को हुने दर वृ’द्धि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर ७६ दश’मलव ३ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत २४ घण्टामा ७६६४ जना निको भएका छन् ।
हालसम्म ३ लाख ९१ हजार ३ सय ४८ जना निको भएका छन् ।१८९६५ जनाको पीसीआर र ९६१ जनाको एन्टी’जेन परीक्ष’ण गर्दा क्रमशः ७५९८ र ३१६ गरी गत २४ घण्टामा ७९१४ जना संक्र’मित थपिएका छन् ।
हालसम्म जम्मा पोजे’टिभ केसहरु ५ लाख १३ हजार २ सय ४१ रहेको छ । गत २४ घण्टामा १ सय ९३ जनाको मृ’त्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा संक्र’मणबाट मृ’त्यु हुने संख्या ६३४६ जना रहेको छ ।काठमाडौंमा १७६१, भक्तपुरमा ३६६ र ललितपुरमा ६९४ जना गरी उपत्यकामा २ हजार ८ सय २१ जना संक्र’मित भएका छन् ।
उता अ’र्थोपे’डिक सर्जन डा. मु’राद हु’सेनको को-भि’ड–१९ को संक्र’मणबाट नि’धन भएको छ । आइतबार विहान ६ बजे नेपाल मेडि’सिटी अस्पतालमा उप’चारको क्रममा ३४ वर्षीय डा. मु’रादको नि’धन भएको हो ।
क’लेजमा प’ढ्दा उनका सि’नियर रहेका डा. सन्तोष बटाजुले को-भि’ड–१९ कारण डा. मु’रादको नि’धन भएको पुष्टि गरे । ‘आज विहान ६ बजे मे’डिसिटी अस्प’तालमा उप’चारकै क्रममा उनको नि’धन भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले एउटा हो’नहार युवा चि’कित्सक गु’मायौं ।’
१० दिनअघि उनलाई वीरगन्जस्थित वीरगन्ज हे’ल्थके’यर हस्पि’टलमा भ’र्ना गरिएको थियो । त्यहाँ स्वास्थ्यमा सु’धार हुन नसकेपछि उनलाई ८ दिनअघि एयर लि’फट गरेर मे’डिसिटीमा ल्याएर उपचार था’लिएको थियो ।
वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकि’त्सक डा. उदय सिंहले पनि को-भि’ड-१९ का मुलुकले एक युवा र उ’र्जाशील चिकित्सक गु’माएको बताए । वीरगन्ज स्था’यी घर भएका डा. मु’रादले बंगलादेशबाट ए’मबीबीएस गरेका हुन् । उनी केही समयअघि मात्रै त्यहीबाट अ’र्थोपे’डिकमा ए’मएस गरेर फ’र्किएका थिए ।
२०७८ जेष्ठ १०, सोमबार २३:२२ गते 1 Minute 557 Views